Yusuf Garaad: UK oo baareysa eedeyn Musuqmaasuq Soomaaliya
Yusuf Garaad 1 August 2015 at 11:54
Waad ku mahadsan tahay haddii aragti aan cidna u gefin aad halkan ku reebto.
Mohamed Abdullahi 2 August 2015 at 05:48
Arrinta baarista shidaalka ee shirkaddo badano oon dibedeed waxaa aad lagu tuhun sanyahay inay suubiyaan wax is daba marin iyo musuq xilliyada ay heshiisyadda la galayaan maamuladda iyo dowladda federaalka. Anigu waxaa is waydiinaya Soomaaliya wax shidaal iyo Gaas ah ilaa hadda lagama soo saarin, in kastoo shirkaddo badan heshiisyo sharci ama sharcidarro ha noqdeene la galeen maamulladda iyo dowladda dhexe oo lacago badan ku bixiyeen, marka la la oran karaaa shidaalkii Soomaaliya isagoo duuggan ayaa la iibsaday illeen sharciyan lacagahan iyo kharashkan badan waxay u bixiyeen inay shidaalka Soomaaliya la soo baxaa xilli ay noqotana dayntan Soomaaliya waaa inay gudda?
shafici dhakade 2 August 2015 at 11:42
waxan soo dhaweynaa baarista lkn ma shidaal qodis ayey sameeysay? mase dowlada ayey lacagsiisay?waa maxay nuuca musuqmaasuq ee lagu eedeyanayo? jawab ha laga siiyo qofkii xog dheeri ah ka heysa